कामकाजी महिलाभन्दा कम छैनन् गृहिणी – Khabar Silo
कामकाजी महिलाभन्दा कम छैनन् गृहिणी
टेलिभिजनमा कुनै विज्ञापन अथवा सिरियलहरुमा देख्नुभएको होला, जसमा दुई साथीहरु धेरै समयपछि भेट हुन्छ । पहिली महिलाले दोस्री महिलालाई के गर्छौ ? भनेर सोध्छिन् । गर्वका साथ दोस्री महिलाले आफू बैंकमा काम गर्ने जवाफ दिन्छिन् । उनले पनि त्यही प्रश्न पहिली महिलालाई सोध्छिन् । ‘म केवल गृहिणी मात्र हुँ, पहिली महिला अफ्ट्यारो मान्दै जवाफ दिन्छिन् ।
टेलिभिजनमा देखिने यस प्रकारका दृष्यहरुले हाम्रो समाजमा गृहिणीको मूल्यांकन कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । स्वयं गृहिणीहरुपनि आफूलाई कामकाजी महिलाको तुलनामा कम सम्झन्छिन् । तर, एउटा गृहिणीको योगदान कुनै कामकाजी महिलाभन्दा कम हुँदैन । एउटा गृहिणीको जागिर त्यस्तो जागिर हो जसमा उनले दिनभरी काम गर्नुपर्छ । उनले कहिल्यै छुट्टी पाउँदिनन् । कुनै स्तरोन्नती हुँदैन, कुनै तलब पाउँदिनन् ।गृहिणीले जसरी आफ्नो घरको काम गर्छिन्, त्यसरी हजारौ रुपैयाँ दिएर पनि कसैले गर्न सक्दैन ।
हिजोआज शहरमा मात्र होइन, स–साना गाउँहरुमा पनि घरेलु कार्यको लागि हजारौं भुक्तानी गर्नुपर्छ । घरको सरसफाई गर्नेहरुले सामान्य कामको लागि पनि ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म लिने गर्छन् । खाना बनाउनको लागि त झन् अझ बढी पैसा दिनुपर्छ । त्यस्तै बच्चाको ट्युसनको कुरा होस् अथवा बुढा आमा–बुबाको सेवा, लुगा धुने कुरा होस् अथवा २४ घण्टा परिवारको सदस्यहरुको सेवामा लागिरहने, गृहिणीद्वारा गरिने कामको सूची धेरै लामो हुन्छ ।
श्रीमतीलाई अर्धाङ्गिनी भन्ने गरिन्छ । तर, उनी त्यो भन्दा पनि बढी छिन् । हरेक कुरामा आफ्ना श्रीमानको लागि श्रीमतीको भूमिका ठीक त्यस्तै हुन्छ, जुन बच्चाको लागि एउटा आमाको हुन्छ । श्रीमानलाई हरेक बिहान चिया, नुहाउनको लागि तातो पानी, शरीर पुछ्न फेता, बिहानको अभ्यासमा जानको लागि जुत्ता, अफिस जाँदा रुमाल र घडी तयार पार्ने श्रीमती नै हुन्छिन् । उनी श्रीमानका हरेक पाइलामा सहयोगी हुन्छिन् ।
त्यस्तै, बच्चालाई बिहान उठ्नासाथ दूध पिउन दिनु, नुहाउनु, खाना खुवाउनु, स्कूलको लागि तयार गर्नु, बच्चा स्कूलबाट फर्केपछि गृहकार्य गराउनु र बच्चासँग बच्चा नै बनेर खेल्नुसम्मको जिम्मेवारी पनि गृहिणीहरुले निभाउनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने गृहिणीले आमाको रुपमा बच्चालाई जे गर्छिन्, त्यो लाखौं रुपैयाँ लिएर पनि अरु कसैले गर्न सक्दैन । श्रीमतीको सहयोगका कारण नै धेरै श्रीमान् आफ्नो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्छन् । बच्चालाई आफ्नो पूर्ण समय दिएर उसलाई भावनात्मक रुपले पूर्ण बनाउने, राम्रो संस्कार दिने गृहिणीको मूल्यांकन धनसँग गर्न सकिँदैन ।
धेरै महिलाहरु आफ्ना बच्चा र बृद्ध सासु–ससुराको राम्रो हेरचाहको लागि कामकाजी महिला पनि गृहिणी भएका छन् । जसकाकारण श्रीमानहरु ढुक्क भएर बाहिरी कामकाज गर्न सक्छन् र सफल पनि हुन्छन् ।
आमाहरुले सबैभन्दा धेरै तलब पाउनुपर्छ भन्ने धारणा पूर्व मिस वल्र्ड मानुषी छिल्लरको रहेको छ । उनका अनुसार महिलाहरुद्वारा गरिएको कामको न प्रशंसा हुन्छ न त त्यसको उनीहरुले कुनै तलब नै पाउँछन् ।एक रिपोर्टका अनुसार महिलाहरु दिनमा करिब ६ घण्टा त्यस्ता काम गर्छन्, जसको लागि उनीहरुले कुनै मूल्य पाउँदैनन् । यदि त्यही काम बाहिरको अन्य कसैलाई लगाउने हो भने यसको एउटा निश्चित मूल्य तिर्नुपथ्र्यो ।
गृहिणीको कामको सही मूल्याकंन हुने हो भने उनीहरुद्वारा गरिने कामको मौद्रिक आंकलन गरेर उनीहरुलाई त्यस बराबरको मूल्य आफ्नो श्रीमानद्वारा प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । गृहिणीहरुले घरको कामको लागि कुनै मूल्य नपाए पनि उनीद्वारा गरिने काम आर्थिक गतिविधिहरुमा समावेश गरेर यसलाई पनि राष्ट्रिय आयमा जोड्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था नभएको कारण हामी आर्थिक विकासमा महिलाहरुको सहभागिता कम गरिरहेका छौं ।
गृहिणीको आर्थिक मूल्यांकनको सन्दर्भ कुरा गर्दा उनीहरुको कार्यको वार्षिक मूल्य कराडांै डलर बराबरको हुन्छ । घरेलु कामको मूल्य निर्धारण नगरिएको कारण नै महिलाहरुको स्थिति उपेक्षित रहेको छ । त्यसैले घरेलु कार्यमा गृहिणीको भूमिकाको बारेमा पनि ध्यानदिनु आवश्यक छ ।
अनुहारमा एक चम्चा नुन लगाउनुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ चमत्कार
काठमाडौँ । के तपाईको अनुहारमा पिम्पल आउन छाड्यो ? यदि हटेको छैन भने तपाईको छाला ओइली हुनुपर्छ। जसको त्वचा ओइली हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले हरेक मौसममा पिम्पल आउने समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । कस्मेटिक उपायबाट केही समयका लागि यसलाई ठीक गर्न त सकिन्छ, तर केही समय पछि पुनः पिम्पल देखिन थाल्छ । यसको अतिरिक्त कस्मेटिक साह्रै महंगा […]
काठमाडौँ । आजबाट साउन महिना सुरु भएको छ। साउनको सुरुवातसंगै अहिले अधिकाशं महिलाका हातमा मेहन्दी र रंगीबिरंगी चुराले सजिएको देख्न सकिन्छ। त्यसमाथि नेपाली हिन्दु नारीहरुकालागि साउन विशेष महत्वको महिना भएकाले पनि यो महिना सुरु हुन नपाउंदै महिलाहरु रंगीन हुन थालेका हुन्। अहिले स–साना बालिका, युवती, अधबैंसे नारी हुन् या बृद्ध महिला, यतिबेला सबैको नाडीमा काँचका […]
अस्पतालमै राजु लामाले ‘तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको’ गीत गाएपछि…
“संसारकै सबैभन्दा सानो पुन्टेगाई ॐ लेखि शेर गर्नुहोस्”